होशियार ! तपाईं बालबालिकालाई ‘जंकफुड’ खुवाउँदै हुनुहुन्छ ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७६, सोमबार १७:३८
काठमाडौं । अस्वस्थकर (जंकफुड) खानामा पर्याप्त पोषणतत्व छैन र यसले बालबालिकाको समग्र स्वास्थ्यमा खराब गर्छ भन्ने जान्दाजान्दै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई जङ्कफुड खुवाइरहेका छन् ।
सस्तो र सजिलै पाइने हुनाले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका अभिभावले आफ्ना बालबालिकालाई खाजाका रूपमा नुन र चिनीको मात्रा बढी भएको अस्वस्थ जङ्कफुड खुवाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
के तपाईलाई थाहा छ व्यक्तिको मृत्यु भएपछि वास्तवमा के हुन्छ ?